Ị nwere ike igosi m ngwá ọrụ Amazon maka nyocha?
Ọbụna na ngwaahịa zuru oke achọrọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịmalite na-achịkwa ahịa ahịa ahụ na Amazon. Ekwuru m na ngwaahịa ahụ n'onwe gị na ndepụta gị agaghị enyere gị aka imeri asọmpi ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-eme nlele ọnụahịa ma na-adị njikere mgbe ọ bụla mgbanwe ma ọ bụ ọnụahịa mkpado ndozi ndị gị na-asọmpi, dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-agba ọsọ mgbasa ozi na ụfọdụ ihe na-ekpo ọkụ. Nke a bụ mgbe ị ga-achọ enyemaka ịchọpụtara kpọmkwem Amazon maka ịgbaso ọnụahịa ma na-echekwa mgbe niile na aro, yana nlele na ọkwa. Ndị a bụ ụfọdụ ngwá ọrụ dị mma na ntanetị n'ịntanetị iji dozie mbipụta ọnụahịa nke ụlọ ọrụ webshop gị na-ezipụ otu ugboro na maka ihe niile.
Onye na-ere ahia
Ọ bụ nhọrọ dị ukwuu maka onye ọ bụla na-ere ahịa ecommerce na ọbụna ndị ọkachamara n'ahịa ahịa. Enwere ike iji ya na Amazon dị ka ngwá ọrụ nyocha maka nyochaa ọnụahịa zuru ezu na iji nweta njikarịcha ahịa nke ngwaahịa - seo high pr links. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ngwá ọrụ a na-eme ka ihe dị mfe - ọ nwere ike inyere gị aka ịmepụta atụmatụ iwu ọnụahịa dị mma iji nwee ike ịdata ahịa, ma mee ka ị nwee oke ahụike dị mma n'otu oge ahụ. Onye na-ere ahịa nwere ike ịghọ ntọala siri ike maka usoro ịzụ ọnụahịa ndị a dị na Amazon, dị ka Buy Box, Ọnọdụ, Ahịa, na Ọnụ Ahịa Ọnụ Ahịa iji kụgbuo ndị iro gị kachasị nso n'ebe ahụ.
Ngwá ọrụ ịchọ enyemaka Amazon ọzọ ị nwere ike iji maka nyocha ịnye ọnụahịa iji mepụta usoro oge gị nke buru ibu na-agba ọsọ na njedebe. Mee onwe gị ka ị nwee ike ịmepụta ihe na-eme ka ị nwee ike ịchọrọ onwe gị na Amazon. Enwekwara ihe nkwekọrịta pụrụ iche nke na-abịa na Appeagle, dịka ngwá ọrụ a nwere ike ịba uru n'ahịa ndị ọzọ, dịka Walmart.
Na-akwado Keepa nkwado ego na ngwá ọrụ nchịkọta, nke na-ekpuchi ihe iri na abụọ nke mba dị iche iche. N'etiti ihe ndị ọzọ dị mkpa, ngwa ngwa ịchọpụta Amazon na ngwa nlekota oru a dịka inye aka site n'inye m ọnụahịa dị egwu akụkọ ihe mere eme, ọnụahịa ọdịda ma ọ bụ nchịkwa dịnụ, data dị omimi nke dị na m nchọgharị, ngwa ngwa-nyochaa nkọwa kachasị na nso nso. usoro na ọnụahịa, nakwa dị ka ọ dị mfe ma dị mfe benchmark analysis megide top ọma na-ere ákwà na Amazon.
Nke a bụ nhọrọ ikpeazụ m ga - achọ igosi gị maka taa. RepricerExpress na-ejikọta ihe kachasị mma nke ịzụ ahịa ngwá ahịa iji jeere gị ozi na Amazon dịka ngwá ọrụ nyocha na ntanetịcha ngwanrọ - niile na otu. Dị ka onye mmepụta, ihe ngwọta a na-ezite nanị na data ọhụrụ iji nyere aka na ndepụta nke ngwaahịa gị na ọdịda na Mpịakọta Zụrụ, ma nwee ike ịdọrọ ndepụta ngwaahịa gị gaa na Nhọrọ Ndị Ọzọ. Achọpụtara m na ọ na-abara m uru ịkụ ndị na-emegide m ọnụahịa ọnụahịa site na ọnụahịa ụfọdụ, mepụta egwuregwu ọnụ ahịa ozugbo na mkpado ndị ọhụrụ kachasị elu nke ndị na-ere ákwà na Amazon, na ime ka ọ dịkwuo mfe site n'ebumnuche na-ewepu otu ndị ahịa dị ka onye asọmpi .